DUBAI: Tusaalooyin Horumarineed - Shaqooyin - Daryeel - Socdaal
Way adag tahay in la aamino oo xiiso geliyo in Dubai ay tagtay
Credit: Sawirada Dubai ee 1960s iyo 1970s soo bandhigi kobcinta horumarinta degaanka: Duufaanta wareega ee xaafadda Deira ayaa hareeraha ku hareereysan sanduuq ...
Ku Dhexgalaan Goobtan
Weli waa wax firfircoon, maalin walba waxaa jira isbeddel cusub oo ku hareereysan agagaarka. Gobolka Imaaraadka Carabta ayaa tusaale u ah waxa aan ugu yeerno horumarinta. Dunida inteeda kale waxay si aad ah u yaaban tahay sida ay u dhammaatay dhul gariirsan, boodh iyo dhululubo dhul ah oo u eg inay yihiin maanta. Iyadoo aan jirin khayraad iyo tiknoolijiyad, magaaladan ayaa wax laga beddelay iyada oo loo marayo caqabadahaas oo kale oo ka adkaata kuwa leh midabo duulaya Waxay igu siineysaa qarqaryo marka aan isku dayo in aan qiyaaso sida ay u adag tahay in la gaaro xaaladdan oo ay hadda ku leedahay dhammaan goobaha ay soo saaraan soo bandhigidooda, dhisidda naqshadaynta heer caalami ah iyo tiknoolajiyada la kiciyay.
Degaanku markii hore wuxuu joogteyn jiray kalluumeysiga iyo dhargashaha kunka sano, iyada oo diiwaanka koowaad ee magaalada lagu sameeyay 1799 markii qabiilka Bani Yas uu aasaasay sida ku tiirsanaanta Abu Dhabi.
Dubai wuxuu noqday Sheikhdom oo kala ah 1833 markii hantida Al-Maktoum ay si nabadgelyo leh u qaadatay. Duufaan wayn oo 1929 ah ayaa sababay burbur ku yimid suuqa caalamiga ah ee lakabka, Sheekh Saeed oo raadinaya ilo kale oo dakhli ah iyo ku casuumida Hindida iyo ganacsatada Iiraan halkan oo aan cashuur bixin. Iyada oo saliidda laga helayo 1966, waddanku wuxuu bedelay aqoonsigiisii ​​oo ka badan tanna wuxuu u horseeday Dubai inuu noqodo magaalda firfircoon ee casriga ah. Maya, waddan kale waxay u maleyn laheyd in mar ka mida magaala xuduudaha ah ee Gacanka in uu kaalin weyn ka ciyaaro dhaqaalaha adduunka.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Makhtoum waa madaxweyne ku xigeenka Emirates iyo Emirate of Dubai iyo golihiisa wasiirada ayaa si wayn u shaqeynaya sidii loo ilaalin lahaa heerka iyo sidoo kale waxa uu ka dhigayaa awood dheeri ah oo leh xeelado dibloomaasiyadeed oo wanaagsan iyo xiriirka caalamiga ah.
Natiijada ugu fiican ee dadaalkooda waa furitaanka EXPO 2020, waxaa marti gelin doona Dubai oo ay ku deeqday Golaha Wakiilada Caalamiga ah ee Shirarka Guud ee Paris bishii Nofeembar 27, 2013. Shirkadda Expo ayaa la filayaa inay ku darto qadar dhaadheer oo ah dhaqaalaha Dubai iyo UAE.
Dhulkani wuxuu u shaqeynayaa sidii shirkad weyn oo magaalo-dhaqaale ah.